चीनबाट एक खर्ब सात अर्ब १७ करोड बराबरको लगानी प्रतिबद्धता » खबरहरुको एउटै केन्द्र
चीनबाट एक खर्ब सात अर्ब १७ करोड बराबरको लगानी प्रतिबद्धता
सोमबार, असार ४, २०७५ १८:२३ मा प्रकाशित !
४ असार, काठमाडौँ । एक हजार ३५८ उद्योग स्थापनाका लागि चीनबाट एक खर्ब सात अर्ब १७ करोड ६४ लाख १० हजार रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको उद्योग विभागका अनुसार हालसम्म चीनबाट एक हजार २९९ उद्योग स्थापनाका लागि ७९ अर्ब ४० करोड ५१ लाख ९० हजार रुपैयाँबराबरको प्रतिबद्धता आएको छ ।
विभागका अनुसार चीनको हङ्कङबाट ४० उद्योग स्थापनाका लागि २७ अर्ब ३६ करोड ६६ लाख रुपैयाँबराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । त्यसमा निर्माण दुई, ऊर्जा, दुई, सञ्चार प्रविधि एक, उत्पादनमूलक सात, सेवामूलक १४ र पर्यटनका १४ उद्योग स्थापनाका लागि प्रतिबद्धता प्राप्त भएको हो । ती उद्योगबाट करिब पाँच हजार जनाले रोजगारी पाउनेछन् ।
यस्तै चीनको ताइवानबाट १९ उद्योग स्थापनाका लागि ४० करोड ४६ लाख २० हजार रुपैयाँबराबरको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । ती उद्योगले करीब एक हजारजनालाई रोजगारी प्रदान गर्नेछ । कृषि, सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमूलक र सेवामूलक उद्योग र पर्यटनमूलक उद्योग स्थापना हुनेछन् ।
चीनबाट ठूला ३९, मझौला १०४ र साना एक हजार एक हजार १५६ उद्योग स्थापनाका लागि प्रस्ताव आएको विभागको भनाइ छ । यस्तै हङ्कङबाट ठूला ११, मझौला नौ र साना २० उद्योग स्थापनाका लागि प्रतिबद्धता आएको हो । विभागले दिएको जानकारीअनुसार चीनको ताइवानबाट एक ठूला उद्योग, चार मझौला र १४ साना उद्योग स्थापनाका लागि प्रस्ताव आएको छ । प्राप्त भएका प्रस्तावलाई आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याएर उद्योग स्थापनाका लागि स्वीकृति दिइसकिएको छ ।
पछिल्लो समयमा चिनियाँ लगानीकर्ता जलविद्युत्, सिमेन्ट, पर्यटन तथा सेवामूलक क्षेत्रमा आकर्षित भएका छन् । ३६ अर्ब रुपैयाँ लगानीको होङ्सी शिवम् सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन शुरु गरिसकेको छ । यस्तै १५ अर्ब रुपैयाँ लगानीको अर्को सिमेन्ट उद्योग स्थापनाका लागि चिनियाँ कम्पनी हुवाजिनले लगानी बोर्डसँग प्रारम्भिक सम्झौता गरिसकेको छ ।
उनले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणपछि केही ठूला परियोजनामा चिनियाँ लगानी भित्रने बताए । यस्तै बुटवल पावर कम्पनीको साझेदारीमा करीब एक हजार मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ लगानी भित्र्याउने तयारीसमेत गरिएको छ ।
PREVIOUS POST Previous post: ‘मेरी मामु’ फ्लोरमा, छायांकनस्थलमा मेस्सी र रोनाल्डोदेखि ६ लाखको कुकुरसम्मको यस्तो चर्चा (भिडियो)
NEXT POST Next post: ११९ सदस्यीय जम्बो टोलीका साथ प्रधानमन्त्री ओली चीन प्रस्थान
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते सोमबार, असार ४, २०७५ १८:२३
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस सोमबार, असार ४, २०७५ १८:२३
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण सोमबार, असार ४, २०७५ १८:२३
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी सोमबार, असार ४, २०७५ १८:२३
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? सोमबार, असार ४, २०७५ १८:२३